ကလေးများအတွက် ၀တ်စုံ The Monster of Colors | လက်မှုပညာ On
ကလေးများအတွက် Color Monster ဝတ်စုံ
တောရက်စ် | 28/10/2021 18:08 | ဟယ်လိုလက်မှုပညာ
Halloween သည် ကလေးများ၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့တစ်နေ့ကို ပျော်ရွှင်စွာ ၀တ်ဆင်ရန် အခွင့်အရေးကို ဤနေရာတွင် အထပ်ထပ် ရောက်ရှိလာပါသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဆိုပေမယ့်၊ သင့်လျော်သောဝတ်စုံကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ပါတီ၏ ဆောင်ပုဒ်ကို ပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ကလေးများအား ကြောက်လန့်မှုမဖြစ်စေနိုင်သော သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Halloween ၏ ဆောင်ပုဒ်အတွင်းမှ ကလေးများအတွက် သင့်လျော်သော ဝတ်စုံများ။ ဘယ်လိုလဲ ဒီ Color Monster ဝတ်စုံကလေးတော်တော်များများရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေထဲက တစ်ခုပါ။
1 Color Monster ဝတ်စုံ
Color Monster ဝတ်စုံ
ကလေးများအတွက် ဤချစ်စရာကောင်းသော Color Monster ဝတ်စုံကို ဖန်တီးရန်၊ သငျသညျကိုအောက်ပါပစ္စည်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
နှစ်သက်ရာ အရောင်ဖြင့် ချည်ထည်. ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အဝါရောင်၊ ဝမ်းနည်းမှုအတွက် အပြာရောင်၊ ဒေါသအတွက် အနီရောင်၊ အကြောက်အတွက် အနက်ရောင်၊ နဲ့ ငြိမ်သက်မှုအတွက် အစိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်အနှစ်သက်ဆုံးကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဤအခြေအနေတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသောသူသည်တည်ငြိမ်သည်။
အနက်ရောင် ခံစားရတယ်။. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အနက်ရောင်ခံစားချက်အချို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။
una ကော်သေနတ် အရက်ဆိုင်များ။
အရင်ဆုံး ချည်ထည်တွေကို သူ့ဘာသာသူ ခေါက်ထားမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်အတိုင်းအတာများ လိုအပ်မည်ကို သိရန် ဆန့်အင်္ကျီပေါ်တွင် တင်ထားသည်။ နဂါးရုပ်ကို ငါတို့ဆွဲတယ်။ ခဲတံဖြင့် လက်ဖြင့်
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန် ကလေးပေါ်ရှိ ချည်ထည်နှစ်ထည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်ပါသည်။
ဆီလီကွန်ပူဖြင့် အထည်နှစ်ထည်ကို ချိတ်ပါ။ နဂါး၏ဦးချိုများဖြင့်။
အနက်ရောင်ကတ်ထူပြားပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆွဲပါ။မျက်လုံးများ၊ ဘီလူး၏ဆံပင်များ၊ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ရှိသည့် အနက်ရောင်ဆံပင်လေးများနှင့် သင်ထည့်သွင်းလိုသည့် အသေးစိတ်အချက်များ။
ဆီလီကွန်သေနတ်နှင့် silhouette တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါ။ အရောင်များရဲ့ Monster မှ။
နောက်ကျောမှာ ဦးခေါင်းကို အပိုင်းပိုင်းခြားထားသော အမြှေးပါးတစ်ခု ထားရှိပါ။ ဘီလူး၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ဆံပင်အချို့နှင့် ဝတ်စုံ၏ အောက်ပိုင်းရှိ အသေးစိတ်အချက်များ။
အဆုံးသတ်ဖို့ အထည်အမြှောင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး ကော်တယ်။ ကလေး၏အဝတ်အစားပေါ်တွင် ၀တ်ဆင်ထားရန် ဝတ်စုံ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » အထူးအခါသမယ » ဟယ်လိုလက်မှုပညာ » ကလေးများအတွက် Color Monster ဝတ်စုံ
တံတားအတွင်း ပြုလုပ်ရန် အိမ်သာသုံးစက္ကူ ကတ်ထူပြား ၅ လိပ်
Halloween အတွက် ၀တ်ဆင်ရန် လက်မှုပညာများ